Ngingayithola yini i-backlink engaphezulu kuwebhusayithi yami ngaphandle kokukhokha i-penny?
Asikho isidingo sokuthi udinga ukuthola ama-backlink angaphezulu wekhwalithi eliphezulu uma ufuna ukuguqula isu sakho samanje se-SEO sibe yindawo ehloniphekile kakhulu enekhono eliphakeme lezinga eliphezulu. Yiqiniso, ukusakaza "ijusi lakho lokuxhumanisa" nokuthuthukisa igunya lakho lewebhusayithi noma ibhulogi emehlweni e-Google kuyindlela enhle yokukushayela ngaphezulu kwe-traffic web. Ekugcineni - ukubona iwebhusayithi yakho noma ibhulogi phakathi kwemiphumela engu-10 yokucinga ohlwini oluphezulu lwe-SERP ye-Google. Kodwa ungayithola kanjani i-backlink ngaphezulu, uma ungenayo ithuba noma ungafuni nje ukuthola lezo zikhokha eziyingozi kakhulu? Mhlawumbe isisombululo esinengqondo kakhulu lapha ukuthola ukuthola izinto ezingezansi ngokwakho - ngenhlanhla kunezindlela eziningi ezisebenzisekayo-izindlela eziqinisekisiwe zokusebenzisa izakhiwo zokuxhumanisa ezingahle zenze umzamo wakho jikelele ku-SEO mahhala - ngaphandle kokuchitha ngisho ne-penny, futhi ngaphandle kokubeka iwebhusayithi yakho noma ibhulogi engcupheni yokuzitholela inhlawulo yesimo se-Google - histidine complex solgar. Lapha kukhona, nakanjani okufinyelelekayo futhi okulula kunokucabanga kwakho.
Amathiphu amahle ukuthola ama-backlink amaningi mahhala - ukwenza ngokwakho
Ukuphawula kumabhulogi anemfanelo ye-DoF indlela enhle yokukusiza ukuthola ama-backlink ngaphezulu. Yiqiniso, akuyona yonke ibhulogi ethandwayo evumela ukuyeka i-DoFollow backlink engxenyeni yayo yokubeka amazwana - ngokuyinhloko ukuvimbela noma yikuphi okwenziwe nge-spammy noma okungafaneleki. Noma kunjalo, ngincoma ukuqala umkhankaso wokwakha isixhumanisi sakho samahhala ngaphandle lapho. Konke okudingayo lapha nje ukuchitha isikhathi esithile ukuphequlula ibhulogi elungile ngaphandle kwalokhu kunqunyelwe bese usebenzisa lokhu ngenzuzo yakho.
Ukubuyekeza amaphrofayli ebhukhimakhi esivele asekhona kakade noma ukugcwalisa ezisha zakho kuyisisombululo esikhulu sokuthola ama-backlink ngaphezulu - kunokushesha futhi mahhala. Konke okudingeka ube ne-backlink entsha ekhomba kuwebhusayithi yakho noma ibhulogi ukuqinisekisa ukuthi wonke amaphrofayili akho kumapulatifomu omphakathi ahamba phambili (njenge-Facebook, Google Plus, LinkedIn, Twitter, njll.) Anezixhumanisi ezikhomba emuva kuwebhusayithi yakho noma ibhulogi - futhi usuqedile.
Ungaba futhi uchwepheshe embonini yebhizinisi noma kumakethe emakethe - vele ujoyine izingxoxo ezishisayo (isibonelo, ku-Quora) nemibuzo nezimpendulo ezihambisana nesihloko esiyinhloko sewebhusayithi yakho noma ibhulogi. Vele uqiniseke ukuthi ukhethe isihloko esifanele, sebenzisa isikhathi esithile ukuze uthole ulwazi olujulile, bese uthumela ukuqonda okubalulekile noma isisombululo esifanele, okufanele ulandelwe nge-backlink ekhomba emuva kumthombo wakho. Ngaleyo ndlela, awukwazi ukuthola kuphela ama-backlink amaningi kuwebhusayithi yakho noma kubhulogi kodwa ubonise ubuchwepheshe bakho obuqinile kanye negunya elithembekile elihle ukushayela isu lakho lonke le-SEO ngesikhathi eside.
Ngokuqinisekile, akuyona indlela ekhululekile yokuthola ama-backlink amaningi. Ngisho ukuthi ukubhalisa izihambeli kuzodinga ukuthi utshale isikhathi esithile nomzamo ngokubhala umbhalo obaluleke kakhulu futhi owusizo (isibonelo, isihloko sekhwalithi noma okuthunyelwe kwabavakashi) ukuze uthole i-backlink efanelekayo ngokubuyisela. Noma kunjalo, ngincoma ukuthi ngibheke leli thuba phakathi kwezixazululo zakho zokwakha izixhumanisi eziphezulu zokuthuthukisa isu eliphelele le-SEO esikalini. Ungakhohlwa ukuthola konke okuvunyelwene ne-blogger noma umnikazi webhusayithi, futhi uqhubeke nokunikeza uhlamvu olubalulekile lokubhala ukuthola i-backlink yemvelo kulokho.